Emmanuel Macron waa Madaxweynaha Faransiiska – Radio Daljir
Emmanuel Macron waa Madaxweynaha Faransiiska
May 7, 2017 7:38 g 0
Tirsigii ugu danbeeyey wuxuu saadaalinayaa in Emmanuel Macron noqonayo Madaxweynaha Faransiiska. Saadaasha hore ee tirsiga codbixintu wuxuu sheegayaa in Macron uu helay 65% woodka Faransa, meesha Marine Le pen, gabadha garabka midig ee siyaasadda Faransa ay heshay 35%, waa saadaasha Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Faransa.
Le Pen way soo wacday Macron, guushana way ugu hambalyaysay.
Macron waa nin ku cusub siyaasadda, waligiisna aan xafiis loo dooran, labadii maalmood ee woodka ugu danbaysana ay soo bexeen xan badan oo ku saabsan noloshiisa, siyaasaddiisa, guurka haweenayda aad ugu da’da weyn ee ay carruurteeda isku filka yihiin, iyo arrimo kale oo xasaasi ah. Macron, sida ay saadasha hore tilmaamayso, waa uu ka booday farfiiqii iyo xankii badnaa ee laga baqayey in uu soo rito hankiisa madaxweynenimo.
Diiwaanka Wararka Radio Daljir
WFP oo la Sheegay in Raashin Dhacay ku Qaybisay Deegaanka Widhwidh
Anisa Xaaji Muumin ‘Reer Burtinle 13 Jir in la Kufsado ma Raalli baad ka Tihiin?’